50,000,000 Kaararka Ganacsiga! | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 19, 2009 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Haddii aadan fursad u helin inaad iska hubiso minicards-yada caanka ah ee Moo, runti waa daaweyn! Casey oo ka socda MooshinIndy.com lahaa set la daabacay iyada sawiro cajiib ah oo ay ahaayeen cajiib ah.
Waxay ka samaysan yihiin shey wanaagsan oo runtii indhahaaga qabanaya. Xaqiiqdii, way iibiyeen in ka badan 50 milyan oo kaararka ganacsiga ah oo ka yimid Moo una geeyey in ka badan 150 dal!
Moo hadda waxay ku dareysaa xulashooyinka qaar:
Sawir qaadista laba dhinac ah - si fudud loogu daro sumadaha shirkadaha, astaamaha, iyo naqshadaha labada dhinac ee hore iyo xagga dambe ee MiniCards, iyadoo la ballaarinayo fursadaha waxa alaabtan loo isticmaali karo. Tusaale ahaan, Perch, oo ah shirkad maareynta maaddooyinka internetka, ayaa ku daabacday koodh dhiirrigelin u gaar ah mid kasta oo ka mid ah MiniCards-keeda, iyaga oo u beddelaya qalab suuqgeyn firfircoon oo la raadin karo.
Fursadaha qaabeynta cusub - Mawduucyo dheeri ah, noocyo kala duwan, iyo midabbo ayaa macaamiisha siinaya ikhtiyaarro badan oo loogu talagalay naqshadeynta kaararkooda, iyaga oo qaadanaya habeynta shaqsiyeed ee MOO heer cusub.
Tirada dhimista - Qalabka cusub ee 400, ganacsiyada yaryar waxay ku iibsan karaan mug weyn si ay u daboolaan baahidooda isku xirnaanta oo ay u helaan qiimo dhimis ballaaran.
Waxaan aaminsanahay in kaararka ganacsiga waa inaan si fudud loogu khasaarin nashqad jaban taasi waa dhaqso loo tuuray isla marka aad ku soo noqoto xafiiska oo aad geliso macluumaadka gudaha LinkedIn. Ka faa'iideyso mar kasta oo aad u gudbiso kaar mustaqbalkaaga soo socda si aad u sameyso aragti gaar ah. MOO Kaararka Ganacsiga - $ 21.99 $ 50 gaar ah, Kaararka Ganacsi ee loo habeeyay, mid walboo leh naqshad ka duwan.
Kaararka ganacsiga ee aan dhawaan iibsaday runtii wax weyn bay sameeyeen - Waxaan helayaa faallooyin mar kasta oo aan u qaybiyo. Inta badan oo dhan, in kastoo, aan helo jawaabo!
Tags: fikradaha kaararka ganacsigakaararka ganacsigamookaararka moo
Noocyo Wanaagsan Ayaa Waqti Dheer Ku Dhamaada